Nepali Sex Stories: November 2014
यसपाली मेरो आफन्त बित्नु भएकोले दशैमा टिका लाउन नहुने भयो । दशैको छुट्टीमा के गर्ने ? कहाँ जाने भई रहेको थियो । मेरो साथीले चितवन बाट फोन गर्यो र उसको पनि यसपाली टिका लाउन नहुने कुरा बतायो । अनि मैले यसपालीको दशैको बिदा चितवन साथीको तिरै बिताउने बिचार गरे र अष्टमीको दिन चितवन तिर लागे । बेलुका ४ बजेको गाडी चढेर म हिँडे , करीब १० बजे चितवन झरे । मेरो साथी गोपाल मलाई लिन आएको थियो र हामी दुबै जना उसको मोटरसाईकलमा चढेर घर तिर लाग्यौ । घरमा पुगेर साथीको आमा , बहिनी रमिला अनि भाई कृष्ण सँग भेटघाट भयो र केहि बेर कुराकानी पछि म र गोपाल कोठा तिर लाग्यौ । म नुहाई धुवाई गरेर निस्के अनि खाना खान किचन गए । खानपिन सके पछि केहि बेर कुराकानी भयो र हामी सुत्न गयौ । कामको सिलसिलामा गोपालको बुवा दिल्ली जानु भाको रै छ र २ दिन पछि पर्कनु हुने थाहा पाए ।
बिहान करीब ६ बजे मेरो निद्रा खुल्यो र म बाथरुम भए तिर गए । बाथरुम भित्र बाट बन्द थियो , शायद कोहि पसेको हुनु पर्छ । मैले ढोका खोल्न खोजेको थाहा पाएर भित्रबाट “एक छिन , म नुहाउँदैछु ” भन्ने बहिनी रमिलाको आवाज आयो , अनि मैले “सरी , सरी !!” भन्दै पुनः कोठा तिर लागे । एक छिन पछि “ल बाथरूम खाली भयो है ” भन्दै रमिला हाम्रो कोठामा छिरिन । भरखर नुहाएर कपाल खुलै राखेर अनि लुंगीले आफ्नो शरीर ढाकेकी रमिला निकै सेक्सी देखिएकि थिई । तै पनि मनलाई सम्हाल्दै ” ल ल , त्यसो भए म जान्छु अब” भने र बाथरुम तिर लागे । बाथरूम छिरेर भित्रबाट छिटकिनि लाएर म पिसाब फेर्न थाले । यसो यता उती नियालेर हेरेको , ह्यांगरमा एउटा पेन्टी झुण्ड्याएको देखे । मलाई के सुर चल्यो हतार हतार त्यो पेन्टी झिके र यस ओल्टाई पल्टाई गर्न थाले । शायद त्यो पेन्टी रमिलाको हुनु पर्छ , उनले बाथरूम जान कसैलाई हतार भएको सोचेर होला , पेन्टी नधुई त्यतीकै राखेकी रहिछ । पेन्टीको पुती बस्ने भाग निर भिजेको थियो , हल्का सेतो सेतो पानी जस्तो थियो । मलाई खपी नसक्नु भयो , मैलो त्यो भाग सुंघ्न थाले । एउटा अनौठो प्रकारको मिठो गन्ध आईरहेको थियो त्यो पेन्टीबाट । मलाई के भो के भो , मेरो लाँडो त ठन्केर आयो । म अझै नाकै गाडेर सो पेन्टी सुँघ्न थाले , मेरो लाँडो ठन्केर खपी नसक्नु को भयो । अनि मैले बिस्तारै लाँडो हल्लाउन थाले , जे सुकै होस एक पटक छोल्नै पर्ला भनेर कसी कसी छोल्न थाले । रमिलाको पेन्टीलाई देब्रे हातले समातेर नाकमा राखी सुँघ्दै दाहिने हातले छोल्न थाले । करी ५ मिनेट जति छोले पछि मेरो लाँडोले पिच्च …… पिच्च……. माल झार्यो , मन हलुँगा भएर आयो अनि मनमनै सोँच्न थाले , रमिलाको पुतीको रस त यति मीठो छ भने , उसको पुती चाट्न र चिक्न पाए कस्तो होला ? त्यस पछि लाँडो सफा गरे अनि मुख धुईओरी म बाहिर निस्के ।
कोठमा गए अनि कपडा बदलेर म बाहिर निस्के । रमिला किचनमा चिया बनाउँदै थिई , म डाईनिङ टेबलमा बसे । रमिलाले चिया र बिस्कुट ल्याएर दिई , अनि भनि “दाई , ल अहिलेलाई चिया र बिस्कुट खाँदै गर्नु , म एकैछिनमा खाजा बनाई हाल्छु है ।” मैले पनि “हुन्छ ” भन्दै चिया र बिस्कुट खान थाले । चिया खाँदै लुकि लुकि रमिलाको कण्डो , दुधको पोका हेर्न थाले । मेरो लाँडो त ठनक्क ठन्केरा आयो । उसको मिडियम साईजको दुधको पोका सम्झन थाले , च्याप्प समातेर माडी रहुँ जस्तो लाग्यो अनि चुसीरहुँ जस्तो लाग्यो । जुरुक्क उठेर गई च्याप्प समातेर उसको पूतीमा ल्वाम कि ल्वाम छिराऊँ झै भएर आयो । बिस्तारै चिया पिई सकेर म पुनः कोठा तिर लागे । गोपाल उठेर नुहाई ओरी बसिरहेको रैछ । हामी केहि बेर गफ गर्न थाल्यौ । एक छिन पछि रिमिलाले खाजा लिएर आई र हामी खाजा खान थाल्यौ । खाजा खाईसके पछि गोपाल र म यसो घुम घाम गर्न घरबाट निस्कियौ । हामी १० बजे तिर फेरि घर छिर्यौ । “दाई खाना तयार छ है , तातो मै खाई हाल्नु , ल बस्नु बस्नु ” रमिला ले भनि , अनि हामी हात मुख धोएर खाना खान बस्यौ । खाना खाई ओरी गोपाल र म कोठा तिर गयौ । दिन भरी हामी टी. भी. हेर्दै गफ गर्दै बस्यौ । करीब साँझको ५ बजे तिर रमिलाले पुनः हामीलाई खाजा खान बोलाई । हामी डाईनिङ टेबलमा बस्यौ । उनले मासु , आलु फ्राई साथै अरु खाने कुरा ल्याएर टेबलमा राखिदिई । “बियर खाने हो ?” भनेर गोपालले मलाई सोध्यो । “दशै हो , खाउँन त” मैले सहज रुपमा उत्तर दिए । गोपालले फ्रिजबाट चीसो २ बोतल बियर झिक्यो र हामी बियर खान थाल्यौ । “दशै हो , आन्टी र रमिलाले पनि अलि अलि बियर लिए भो नि त” मैले उत्सुक हुँदै भने । “ल ल हुन्छ , देउ न त हामीलाई पनि १ -१ गिलास” आन्टीले भन्नु भयो र रमिलाले २ वटा गिलास ल्याई । मैले बियर राखिदिए अनि “चियर्स …………” भन्दै बियर को चुस्की लिन थाल्यौ । खाँदा खाँदै ८ बोतल बियर सकिएछ , मलाई त झम झम बनायो । आन्टी र रमिलाले पनि अलि अलि मातेको कुरा बताए । “ल अब खाना खाने है त ” भन्दै आन्टीले खाना पस्किन थाल्नु भयो र हामी हात धुएर बस्यौ । खाना खाई सके पछि म टी.भी. हेर्न थाले तर गोपाल चै कोठा तिर सुत्न गयो । आन्टी र रमिला किचन सफा गर्न थाले ।
करीब साँढे १० तिर रमिला पनि सबै काम सकेर टी. भी. कोठामा आई । म टी. भी. मा सोनी च्यानलको प्रोग्राम हेर्दै थिए । उनी मेरो छेउ मा आएर बसी । हामी बिच पढाई सम्बन्धी कुरा चल्न थाल्यो । करीब आधा घण्टा कुरा गरे पछि , म पिसाब फेर्न बाथरुम गए अनि आए , रमिला टी. भी. मा गीतको च्यानल लाएर बसी रा थी । म पनि गीतहरू हेर्दै बसे । करीब ११ बजे तिर म उठे र कोठा तिर जान लागे । “एक छिन बस्नुन , अनि जानु नि सुत्नु , किन हतार गर्नु भाको ?” रमिलाले भनी । मैले पनि “हुन्छ नि त” भन्दै पुनः सोफामा उ छेउमा बसे । सबै जना सुती सकेका थिए । “दाई म एउटा कुरा सोध्छु , नरिसाउनु ल ” रमिलाले भनी । “हुन्छ सोध न , किन रिसाउनु र ” मैले जवाफ फर्काए । “तपाईको गर्लफ्रेण्ड छ कि छैन ?” उनले लजाउँदै सोधी । “छैन नि , म जस्तोलाई कुन केटीले मन पराउँछ र ” मैले भने । “किन मन नपराउनु र , तपाई राम्रो हुनुहुन्छ , बानी बेहोरा पनि राम्रै छ जस्तो छ ” उनले भनी । “खै , शायद अहिले सम्म कुनै केटी मेरो लागि जन्मेको छैन कि ?” मैले जवाफ फर्काए । “अनि तिम्रो चै ब्वाईफ्रेण्ड छ कि छैन त” मैले तुरन्तै उसलाई सोधे । “ब्वाईफ्रेण्ड भनेर नै चै छैन , तर मन पर्ने एकजना केटा चै छ, तर उसले मन पराउँछ पराउँदैन थाहा छैन” उनले अलि लजाएको स्वरमा भनी । “हो र , अनि प्रोपोज गरेको छैनौ त ?” मैले पुनः सोधे । “छैन नि , पहिला पढाई नै सकाउँ कि भनेर नि ” उनले जवाफ फर्काई । “ए , त्यो पनि राम्रै हो ” मैले उसको ढाँड मा धपधपाउँदै भने । उ मेरो अझ नजिकै आउँदै भनि “साँच्ची , म तपाईलाई कस्तो लाग्छ ?” उनले सोधी । ” उनको फिला मेरो फिलासँग टाँसिएको थियो । उनको दुधको पोकाहरू लुगा बाहिर बाट प्रष्ट देखिन्थ्यो । उनले टाईट टी-शर्ट लाकि थिई र टाईट पेन्ट । “तिमी असाध्यै राम्री छौ नि , तिमीलाई पाउने त भाग्यमानी हुन्छ ” मैले उनलाई फुर्काउन जवाफ दिए । “होला होला , म त्यती राम्री त छैन , म भन्दा मेरा साथीहरू कती राम्री छन” उनले मधुरो स्वरमा जवाफ दिई । “हो क्या , तिमी राम्री छौ , तिम्रो जीउडाल पनि मिलेको छ” मैले उनको गालामा समाउँदै भने । “धन्यवाद तपाईलाई , मलाई राम्री भन्नु भाको मा” उनले जवाफ दिई । उनको गाला समाउँदा उनले कुनै प्रतिकार गरीनन , जसले मलाई अझ अगाडी बढ्ने हौसला प्रदान गर्यो । अनि मैले बिस्तारै उनलाई अंगालो हाले र भने “तिमी राम्री छौ , तिमी जस्तो केटी पाए त म अहिले नै I Love You भन्थे” मैले साहस गरेर भने । “हो र ? ल हेरौ न त I Love You भनेको” भन्दै उनी अझ म सँग टाँसिन थाली । मैले सोचे , मौका यही हो , अनि उसलाई दुबै हात ले अंगालोमा हाले र बिस्तारै कानको छेउमा “I Love You” भने । उनी मेरो अंगालोबाट फुत्किई अलि पर गएर हाँस्न थाली । म फेरी उनलाई समाउन अझ नजिक गए । “साच्ची भनेको , I Love You” मैले उनलाई पुनः अंगालोमा बाँधेर भने । उनी केही नभनी मेरो छातीमा टाउको राखेर बसी रहीन । मलाई अझ खपी नसक्नु भयो , उसको गालामा किस गर्दै भने “I Love You रमिला, के तिमी मेरो गर्लफ्रेण्ड बन्छौ ?” उनले केही पनि भनिनन् । “Yes भन कि No भन , नत्र मा सुत्न जान्छु । उनले लजाएर “Yes” भनि । अनै मैले बिस्तारै उनको गालामा , निधारमा किस गर्न थाले ।
अब मलाई कुनै डर थिएन , जसले गर्दा मैले बिस्तारै उनको मुखमा मेरो मुख लगे अनि बिस्तारै मुखमा किस गर्न थाले । बिस्तारै बिस्तारै मेरो जिब्रो ले उसको जिब्रो खेलाउन थाले । मेरा हातहरु सुस्तरी सुस्तरी उनको दुधको पोका तिर सार्न थाले । “एक छिन , दाई वा आमा आउनु भयो भने मार्नु हुन्छ ” उनले डराउँदै भनी । “आउँदैनन होला, सबै मस्त निद्रामा छन क्या” मैले उनलाई अंगालोमा बाँधेरै जवाफ फर्काए । बिस्तारै उनलाई किस गर्दै टी-शर्ट बाहिरबाट नै उनको कसिलो दुधको पोकाहरू माड्न थाले । उनी “स्वाऽऽऽऽऽऽऽ , स्वाऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्न थाली । मेरो लाँडो ठन्केर कट्टुनै च्यातेर बाहिर निस्केला झै भाको थियो । बिस्तारै उनको टी-शर्ट भित्रै हात लगेर उनको दुध माड्न थाले । उनलाई किस गर्दै मैले दुबै हात उसको ढाँड तिर लगेर ब्राको हुक खोलिदिए र दुबै हातले उसको दुबै दुधको पोकाहरू माड्न थाले । “ऐयाऽऽऽऽ , दुख्यो , अलि बिस्तारै गर्नु न ” उनले रुञ्चे स्वरमा भनी । “सरी सरी , म त जोशमा आएर बेस्सरी गरेछु , ल ल अब बिस्तारै गर्छु” भने अनि दुधको पोकाहरू बिस्तारै बिस्तारै माड्न थाले । अब उनी पनि मलाई किस गर्दै थिई , उनीलाई पनि अब जोश चढे जस्तो थियो । करीब १० मिनेट जति किस गर्ने र दुध माड्ने काम भइ पछि मैले उनलाई सोफामा बसाए । उनी कुनै अप्ठयारो नमानी बसी रही । अनि मैले उनको टी-शर्ट र ब्रा खोले , उनको कसिलो दुधको पोका देखेर म मा एक प्रकारको तरंग पैदा भयो । अनि म उसको अगाडी बसे अनि उनको दुधको मुण्टो जिब्रोले खेलाउन थाले । उनी आँख चिम्म गरेर लामो लामो सास फेर्दै थिई “स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ, स्वाऽऽऽऽऽऽऽऽऽ” अब म मा सहन सक्ने स्थिती थिएन , कति बेला उसको पूतीको दर्शन गरौ , मेरो लाँडो छिराएर मजाले चिकौ भई सकेको थियो । मैले बिस्तारै रमिलालाई सोफामा नै सुताए । उनको पेन्ट खोलिदिए । उनले केही भनिनन , शायद उनलाई पनि मजा आई रहेको थियो र चिक्नलाई आतुर भई सकेको थियो । उनले गुलाबी रङको पेन्टी लगाएकी रहिछ । पेन्टीको तल भाग भिजेको थियो , शायद मैले उसको दुधको पोका माडेको ले उसको पुतीबाट पानी झरेको हुनु ‍पर्छ । मैले पेन्टी बाहिरबाटै उनको पुती खेलाउन थाले । उनी त झन ईमोशनमा आईछ क्यार , “आहहहहहह, ओहहहहह , उफफफफफफ” भन्दै कराउन थाली । मलाई उनको त्यो आवाजले झन उर्जा प्रदान गर्यो । मैले उनको कट्टु पनि खोलेर फ्याकिदिए , अब उनी मेरो अगाडी नांगै थिई । मैले पनि हतार हतार आफ्नो सबै लुगा खोले अनि उनको पुती खेलाउन थाले । देब्रे हातले उनको पुतीको टीसी खेलाउन थाले अनि दाहिले हातले उनको दुधको पोकाहरू माड्न थाले । करीब १० मिनेट पछि उनको पुतीबाट पानी झर्न थाल्यो । मेरो हात पुरै च्याप-च्याप भयो । उनी सुस्केरा हाल्दै आफ्नो कण्डो हल्लाउन थाली । शायद उनलाई पनि खपी नसक्नु भई सकेको थियो , त्यसैले अब उनी आँख चिम्म गरेरै मलाई अंगालोमा बाँधेर किस गर्न थाली । मैले उसको दाहिने हात समाएर मेरो लाँडोमा राखि दिए । उनी अब मेरो लाँडो खेलाउन थाली । यस्तो लाग्थ्यो लाँडो खेलाउन उनी खप्पीस थिई । लाँडोलाई च्याप्प समाएर उनी भित्र-बाहिर गर्न थाली । मैले केही नभनी उको पुती खेलाउन थाले र सँग सँगै दुध पनि माडदै थिए ।
यस्तै ५ मिनेट जति पछि मैले उनको खुट्टा फटाएर अब चिक्ने अवस्थामा मिलाए । बिस्तारै मेरो लाँडो उसको पुतीको मुखमा लगे अनि बिस्तारै छिराउन खोजे । शायद उनको पुती भरी पानी भएकोले गर्दा होला , कुनै गाह्रो नभई मेरो लाँडो उसको पुतीमा स्वात्तै भित्र छिर्यो । “आहहहहहहहह” उनी कराई । अब म बिस्तारै बिस्तारै उनलाई चिक्न थाले । म जति उनलाई ठेल्थे , उनी त्यती नै तल बाट कण्डो हल्लाउँदै मलाई पनि ठेल्थी , यस्तो लाग्थ्यो उनी चिक्न र चिकाउन पनि सिपालु भई सकेकी थिई । मलाई कुनै मतलबनै थिएन , जे होस आज पनि एउटा पुती चिकिदै थियो । यही सम्झेर म उनलाई कस्सी कस्सी चिक्न थाले । उनी पनि मलाई तलबाट माथी उफ्रिदै साथ दिदै थिई । १० मिनेट जति यो अवस्थामा चिके पछि मैले मेरो लाँडो उसको पुतीबाट निकाले र उनलाई सोफाबाट उठाए । “तिमीलाई कस्तो लागि रहेछ रमिला ?” मैले अन्जान भएर सोँधे । “मलाई त अचम्म लागि रहेको छ, हामी कसरी यस्तो गर्न थाल्यौ है , मलाई त सपना जस्तो लागि रहेको छ । तपाई मेरो दाईको साथी , तर तपाईसँग नै म आज सेक्स गर्दैछु , दाईले थाहा पायो भने त बर्बादै हुन्छ ” उनले भनी । “कसरी थाहा पाउँछ र , तिमी पनि भन्दैनौ , म पनि भन्दिन , होईन ?” मैले जवाफ दिए । “त्यो त हो , तै पनि …….” उनले लजाउँदै भनी । “छोडदेउ यो कुरा , खै सोफामा हात राखेर घोप्टो परेर बस” मैले उनलाई सोफा तिर ढकेल्दै भने । उनी पनि मैले भने जस्तै गरेर बसी , हुनसक्छ उनले यो पोजिसनमा पहिले पनि चिकिसकेको हुनुपर्छ । उनी खुट्टा फट्याएर घोप्टो परेर चिक्न सजिलो हुने गरी बसी । मलाई खासै गाह्रो भएन र मैल उनलाई कुकुर ले चिकेको स्टाईलले चिक्ने बिचार गरे । बिस्तारै मेरो लाँडो उनको पुतीमा छिराए । “ऐय्याऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ दुख्यो , बिस्तारै गर्नु न , यसरी गर्दा त दुख्छ” उनले कराउँदै भनी । अनि मैले बिस्तारै उनको पुतीमा लाँडो छिराए र बिस्तारै बिस्तारै धक्का दिन थाले । उनी “आहहहहहहह ओहहहहहहह उफफफफफफफ” गर्दै कराउन थाली । उनका ती सुस्केराहरूले मेरो जोश बढ्न थाल्यो र बिस्तारै बिस्तारै चिकाईको स्पीड बढाउन थाले । अब भने म फुल स्पीडमा उनलाई चिक्न थाले । “कचक कचक कुचुक कुचक ठ्याप ठ्याप” यस्ता आवाजहरू सो कोठामा गुञ्जीरहेको थियो । म बल गरी गरी उनलाई पछाडिबाट चिक्दै थिए , उनी पनि कण्डो हल्लाउँदै मलाई साथ दिदै थिई । उनी निकै जोशमा कराउँदै थिई “अझै कस्सेर , अझै कस्सेर ……….. अलि छिटो…….. अलि छिटो………” म पनि भएभरको बल लगाउँदै उनको कम्मर समाउँदै चिक्न थाले । करीब ७-८ मिनेट जती चिके पछि मेरो माल झर्ला जस्तो भयो अनि फुत्त मेरो लाँडो उसको पुतीबाट बाहिर निकाले । “किन निकाल्नु भाको , गर्नु न प्लिज” रमिला स्वाँ स्वाँ गर्दै कराउन थाली । “एकछिन न , मेरो झर्न लाग्यो क्या” मैले भने अनि उनलाई मतिर फर्काएर फेरी किस गर्न थाले । एक हातले फेरि उसको पुती खेलाउन थाले । २-३ मिनेट पछि मैले उनलाई भुईमा कोल्टे पारेर सुताए अनि म उनको पछाडी पटी कोल्टे परेर सुते । उनको एउटा खुट्टा माथि तिर उचाले अनि बिस्तारै उनको पुतीमा मेरो लाँडो छिराए । यसरी चिक्दा मेरो पुरै लाँडो उनको पुती भित्र त छिरेन तर पनि चिक्न मजा नै आउने रैछ । बिस्तारै बिस्तारै पछाडी बाट उनलाई चिक्न थाले । यसरी धेरै बेर चिक्न सकिन , थाकिदो रैछ र पुनः उठेर उनलाई उतानो बनाए अनि उनको दुबै खुट्टा मेरो काँध माथी राखे र फेरि उनलाई चिक्न थाले । यसरी चिक्दा चै पुरै लाँडो उनको पुती भित्र छिर्यो । म बल गरी गरी उनलाई यसरीनै चिक्न थाले , उनी फेरी “आहहहहहहह ओहहहहहह उफफफफफफ, अझै अझै …….. छिटो छिटो……..” भन्दै कराउन थाली । यसरी लगातार ५ मिनेट जति चिके पछि , मैले मेरो लाडोबाट निस्केको माललाई सम्हाल्नै सकिन र उनको पुती भित्र सबै माल झारिदिए । म थाकेर निकै शिथिल भए र उनको माथी नै पल्टि रहे । शायद रमिलालाई अझै चिकाई पुगेको थिएन क्यार , उनी मुनिबाट कण्डो हल्लाउँदै “गर्नु न प्लिज……….” भन्दै कराउँदै थिई । म बचेको बल प्रयोग गर्दै फेरि हल्लिन थाले । लाँडो सुकेर लुत्रुक्क परि सकेको थियो , तै पनि उनलाई माथीबाट धक्का दिँदै थिए । २ मिनेट जति पछि म हल्लिनै सकिन र लाँडो बाहिर निकालेर उसको छेउमा पल्टिए । उनी पनि स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ स्वाँऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽऽ गर्दै लामो लामो सास फेर्दै थिई । ५ मिनेट जति हामी त्यै अवस्थामा पल्टि रह्यौ । “कस्तो लाग्यो रमिला?” मैले सोँधे । “रमाईलो भयो , खुशी लाग्यो , मजा आयो” उनले लामो लामो सास फेर्दै भनी । “मलाई पनि मजा आयो , तिम्रो अनुहार मात्रै होईन सबै थोक राम्रो रहेछ , I Love You” भन्दै उनलाई किस गर्न थाले । उनले पनि “I Love You” भन्दै मलाई अंगालो हाली र किस गर्न थाली । “ल अब सुत्न जाउँ ल, भोलि फेरि गर्ने नि है” भन्दै म उठेर कपडा लाउन थाले । उनी पनि “हुन्छ हुन्छ” भन्दै उठी र कपडा लाउन थाली । “गुडनाईट, I Love You” भन्दै म उसलाई किस गरे अनि हामी छुट्टियौ । उनी पनि “Thank You, I Love You Too” भन्दै बाथरुम तिर लागी । म पुरै थाकेको ले कोठामा छिर्न बितिकै खाटमा पल्टे । रमिलाको दुधको पोका, पुती , उनलाई चिकेको झलझली आँखामा आई रह्यो , कतिबेला बिहान हुन्छ अनि फेरि चिकौला भन्ने सम्झँदा सम्झँदै म भुसुक्कै निदाएछु
Posted by sexjob at 7:31 PM3comments:
Posted by sexjob at 5:44 PM3comments:
Posted by sexjob at 5:42 PM2comments:
मुस्कुरौदै रश्मी दिदी ले
आँखाको ईशारा गर्नुवो मलाई म हेरेको हेरेइ वएन।
रश्मी दिदी मेरो बेद्मा थोरै खुट्टा फत्तएर मलाई
ईशारा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। मलाई लाज लाग्यो मैले
प्रश्त बुझिसकेको थिएन कि रश्मी दिदी ले मलाई मेरै
बेद्मा सुतेर मलाई चिक्न निम्तो दिदै हुनुहुन्थ्यो। म
एक्छिन्सम्मा रश्मी दिदी लाई हेरिरहेन
केही बोलिन, तेस्पछी रश्मी दिदिले, के हेरेको? आउ न
अली नजिक वन्नुवयो। उहक पोतिल दुध्मा पनि नजर
गये अनी उहले फत्तएर बस्नुवको खुट्टा, तेस्पछी मलाई
खोइ के भएछ के, म आँफैन्ले थाहा पाउन सकिन म
बिस्तारै रश्मी दिदी नजिक गएर उहानलाई
बिस्तारै समतेन, अनी अझै नजिक गएर उहानलाई चुम्न
थालेन। जिन्दगीकै पहिलोचोटएे थियो म
कोही केटी लाई चुम्दै थिएन, एउटा अनौथो तरङले
तरङित वयो शरीर,
रश्मी दिदी को तातो जिब्रो मेरो मुख्मा थियो। म
आँफैन हरैरहेको थिएन मैले बेस्कन
रश्मी दिदी को टाउकोमा समतेर अझ नजिक भएर
उहानलाई चुम्न थालेन एउटा छुत्तै आनन्द
अैराखेको थियो, मेरो पुरुष भाई तल सर जङल पाँचआउँदै
अती तातो फलामए रोद जस्तो हुँदै थियो।
एक्छिन्सम्मा चुमेपछी बिस्तारै म
रश्मी दिदिको घती अनी स्तन म झरेर
चुमिरहेको थिएन, एत्तिकैमा आवाज आयो “ओिएे”!!!
झसँग भएउन हामी दुबइजन छेउमै “सुमि” दिदी आएर
अनौथो अनुहारले हाम्लाई हेरिरहनुवको थियो। म
रश्मी दिदी देखी अलिक टाढा गएन, रश्मी दिदिले
सुमी दिदिको मुख्मा हेर्दाइ“हेर न सुमी मैले त
कन्ट्रोल नै गर्न सकिन” भन्नुवयो अनी बेद्बाट उथ्न
खोज्दै मलाई “ भाई जती जे पनि भयो सबै हामी दुई
को शाहअंअती म नै भयो एतिमै सिमित रखौन है” भन्नु
भो म केही बोलिन। सुमी दिदिले एतिकैमा “तिमिहरु
दुइको शाहअंअती म मपनी मिसिन्छु नि त” भन्दै
हास्नुवयो। अनी बिस्तारै सुमी दिदिले
मेरो सुतिसकेको कान्छो भाई लाई बहिरबतै उहानक
सुकोमल हात ले सुम्सुम्यौन थालनुवो। सुमी दिदी अझ
नजिकै आएर मलाई समतेर चुम्न थालनुवो, एक्छिन
सम्मा हाम्रो एही चक्र च्लिरह्यो, मैले सुमी दिदिक
पुषत स्तन पनि बिस्तारै खेलौन थालेन, अब लग्वग
सुमी दिदी पागल जस्ताइ हुन लगिसक्नुवको थियो।
एत्तिकैमा रश्मी दिदिले भाई “कोण्डोम्” छ त?
“कोण्डोम्” नलगै त गर्न हुन्न भन्नुवयो। मलाई
पर्यो फसद मसँग “कोण्डोम्” नै थिएन। मन्मनै सोचेन
“ठुक्क एस्तो मौका मिलेको पनि आज चिक्न पाइएल
जस्तो छैन” लाग्यो बहिर तिर दलेर मात्रै काम
चलाऊनुपर्ल जस्ताइ भयो। तर सुमी दिदिलाई चिक्न
झनै हतरो भाईसकेको ले “मा लिएर आउछु” भनेर उहान
आफ्नो लुग मिलौदै मेडिकल तिर जानुवो। अब मैले
फेरी बिस्तारै रश्मी दिदी लाई पगल्न सुरु गरेन। तर
म आँफैन्लाई खपिनसक्नु वैसकेको थियो, कान्छो भाईले
बन्ता गर्ल जस्तो लागिरको थियो। मैले
रश्मी दिदिको जक्केत्,टीसर्ट, अनी पन्त बिस्तारै
खोलिदिएन। अब रश्मी दिदिको शरीरमा एउटा ब्र
र एउटा पन्तएे मात्रै थियो। मैले बहिरबतै बिस्तारै
रश्मी दिदिको पुती चलाऊन थालेन, धेरै रौन वएर
होल अली गुजुक्क थियो। रश्मी दिदिको अनुहार
पनि हेर्दाइ थिएन म उहान एकदमऐ आनन्द
लिएेरहनुवको थ्यो, मैले एक्छिन उहानक पोतिल स्तन
पनि मदेन, स्तन्को तुप्पो एकदम खद वैसकेको थियो। जे
पर्छ पर्छ वनेर मैले आफ्न सबै लुग हरु खोलेर पुरै
नाङो खद वएन, हल्क बायन तिर
बङिएको मेरो लादो को तुप्पोमा केही झोल
अैसकेको थियो। म बिस्तारै रश्मी दिदी नजिक गएर
मेरो लादो उहानको पुती छेउमा लगेर बहिर नै दल्न
थालेन, रश्मी दिदी ले नाइ नदल त्यहन भन्नुवयो मैले
तेहिपनी उहानको पुतिक बक्ल कालाई रौन
हरुमा मेरो लदो लगेर दलेन। मलाई छुत्तै महसुस
वैरहेको थियो, मेरो लदो ले पानी फल्ल जस्तो गर्न
लागिसकेको थियो। सुमी दिदी अैपुग्नुवएछ, एस्
वटा “कोण्डोम्” लिएर। अनी उहान छेउमा बस्नुवो र
एउटा कोन्दोम निकलेर मेरो बङो लादो हेर्दाइ
हासेर “हेर दीन्नै दहिने हात्ले हल्लाएर बङो वएछ”
वन्दै मेरो लदोमा कोन्दोम्ले धकिदिनुवो। अब बल्ल
एतिन्जेल पर्खिरको फल पाउदै थिएन मैले हतर गरेर
रश्मी दिदी को पुती वारीपरिक वुत्ल पाँचआउँदै हल्क
पुती फत्तएर मेरो लदो लाई थेलेन। स्वर्गिय
आनन्दको महसुस वयो मलाई क्य मज्ज आयो ख्वस्स गरेर
छिर्यो लादो। मैले रश्मी दिदी क दुध माद्दै
खुट्टा कध्मा हलेर एक्छिन धक्क मर्ने बित्तिकै
मेरो लदोले पनि फल्यो “सिरिक सिरिक्” गर्दै। म
एक्छिन सम्मा रश्मी दिदी माथि नै सुतिरहेन,
सुमी दिदी वने हाँस्दै
हुनुहुन्थ्यो कती छिटो झरेको वन्दै। म उठेर सिधै
सुमी दिदिलाई समतेर बेद्मा सुतएन अनी उहानक सबै
लुग एक्-एक गर्दै छोडएर नङै बनएन। अनी एक्छिन
उहानको शरीरमा रमएन उहानलाई गिजलेन, दुध मदेन,
पुती मुसरेन्,किस्स गरेन।
एती गर्दसम्मा मेरो लदो फेरी खद
वयो अनी कोन्दोम लगएर मैले सुमी दिदी को पुती म
लदो घुसरेन। सुमी दिदिलाई त धेरै बेर्सम्मा दिएन
धक्क, कारीब ५मिनट नोन्-स्तोप
चिकेपछी फेरी मेरो फुसी झर्यो तर
यो चोटि लदो लास्तै पोल्दै फुसी झर्यो।
जती रश्मी दिदिलाई चिक्द मज्ज
आएको थियो तेती मज्ज वने सुमी दिदिलाई चिक्द
Posted by sexjob at 8:38 AM2comments:
Hello friends mero naam Ravi Gautam ho ! Mero ghar nawalparasi district ko sunwal vanne thau ho . Ma bbs 3rd year ko student ho ! Aaj ma , mero ra maiju ko baini cta sex gareko katha sunauna chahanxu .Kripaya language galat vaye ma maaf gardinu hola!!!**
Yo kura6mahina agadi ko ho !! Dherai vathyo mama ghar na gako .. tei vayera ma ghar ma mama ko ghar janxu vanera hinde ... !!!
Ani ma sanjh ko bela ma puge .. maiju le dhoka kholnu vo .. maiju le ohhooo. bhanja babu k xa haal khabar la aaunu.. vannu vo vitra gako taw .. 16- 17 saal ko apsara jasto keti dekhe ... ko ho vanera sodhe .. maiju le mero baini ho vannu vo.. (ma mama ko bihe ma gako thena exam le garda so chineko then) .. unle malai hasera namaste vanin.. ma pani musuka hasi diye... mero lado ni thankina thalyo.. unlai dekhera .. ani maile timro naam k ho vanera sodhe.. unle hasera .. kritika vanin.. ani mama khoi vanera sodhe . mama taw kaam parera butwal janu vaxa vannu vo.. ghar .. ma maiju ,ma , maiju ko xora (5 saal ko ) .. ra kritika matra them . .. ani khana khayera sutna lage... ma chai.. blanket odera .. blue film herna thale ... chikna paye ni hunthyo jasto lagyo.. . raati.. 12 baje tira uthera 1 no garna toilet tira gaye .. dhoka band thiyo.. vitra baat sustari.. awaz aaudai thiyo.. ahh ummm ahh.. koi haixa vanera maiju ko kotha tira here.. maiju mast nind ma hunu hunthyo... xora cta .... pakai pani kritiki ho vane .. ma chai kaan thado banayera suni rah the.... tespaxi uni .. raato mukh banayera bahira aain ra maiju ko kotha tira gayin.. ma chai raat vari blue film herdai lado choldai base.. ***
Bihan uthe paxi kritika lai kasari chikne hola vanera sochera baseko thiye .. maiju le vannu vo babu ma pasal gayera aaunxu.. vannu vo. maile hunxa vane . kritika babu cta khelera baseki thin.. ma pani room ma gaye yei mauka ho vanera ... kritika le babu lai kiss gardai thin .. maile vane . hamilai ni gare hunthyo vanera .. unle jawab din.. toki dinxu dheraii na bolnu vanin.. maile lala tokera dekhau taw kati ko dum raixa . unle mero hath.. ma besera tokin.. maile aaiya vane .. unke xodin . hath ma daat ko nisaan basyo.. maile vane .. maile pani tokna sakxu vane .. unle lala heram kasari toknu hunxa . haath ma hoina naak ma toki dinxu... unle herun herum vani . bhai ko agadi tae hunna vane .. unle vanin ani kaha taw.. maile vane maiju ko kotha ma .. unle hunxa .. ani kotha tira gayem.. ani maile naak tokna thale ani ekasi maile unko lips chusna thale.. unle kei vaninan ..5min kiss gare paxi .. door ma bell bajyo .. maiju aaunu vako raixa .. .. kritika le dhoka kholin .. tespaxi .. maiju le babu lai school xodera aaunxu .. vannu .. vo ra kritika lai bhada majha vannu vo.. ma tv herera baseko thiyo.. unle afno .. kaam sakera .. ma cta sofa ma basera tv herna thalin...malai k garam k garam jasto vo .. ani maile unko hath samate ... unle kei vaninan.. tespaxi maile kiss garna thale m. unle ni sath dina thalin.. maile unlai uthayera bedroom ma liyera gaye.. maile afno kapda khole .. unko bra pani kholi diye.. unko dudh ko poka dekhera.. mero lado thankio....kritika ko puti chameko taw gilo vai sakeko raixa .. maile afno lado chusna vane tara uni maninan.. .. ****
Tes paxi .. maile lado chirauna thale ekai xoti .. lado ghusyo uni aaiya dukhyo vanin.. maile chikna thale..uni aahh ummm aahh. garna thalin..5min jati gare paxi .. jharla jasto vo maile lado .. nikalera unko mukj ma jabardasti fusi jhardye... puti chikda tight nai thiyo... tara puti baat blood na niklida ... malai sankha lagyo yo pailei dekhi chikauri raixa .. kati jana sanga gari holi vane... tara unlai kei vanin.... ek xin paxi maiju ni aaunnu vo.. ma bath garna gaye..aaj pani . dar lagxa aids hunxa ki vanera without condom garera .. uni cta ... aaj pani tyo din ko yaad aaunxa .. fb ma friend request pathako xu kritika lai.. milexa vane feri garxu ... ani feri share garxu .. sex story..
Posted by sexjob at 8:27 AM2comments: